Xujooyinka 🥇 Gali oo ka raaxayso Emulator.online
Fiiro gaar ah: in lagu ciyaaro nooca mobilada wareega shaashadda
Xujooyin. Hoos waxaan ku tusi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u fahamto ciyaartan quruxda badan. Laga soo bilaabo macnihiisa asalka ah, asalkiisa, faa iidooyinkiisa, noocyada xujooyinka jira iyo waliba istiraatiijiyado si dhakhso leh loogu xaliyo.
Halxiraalaha: Sida loo ciyaaro talaabo talaabo 😀
Si loo sameeyo a xujo khadka tooska ah ee bilaashka ah, waa inaad sameysaa raac tilmaamahan talaabo talaabo ah:
Tallaabada 2. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u gasho websaydhka, ciyaarta ayaa mar hore lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Kaliya waa inaad garaac ciyaarta oo waxaad bilaabi kartaa inaad doorato xujada aad aadka u jeceshahay. Waxaad dooran kartaa sawirka aad ugu jeceshahay, iyo ka dib markii aad dooratayWaxa kale oo aad dooran kartaa tirada gogo 'ee xujada ay yeelan doonto.
Tallaabada 4. U soo wada ururi dhammaan qaybaha si qaabka sawirka aad dooratay loo abuuro.
Tallaabada 5. Kadib markaad dhamaysato ciyaar, guji "Dib u bilow" in la sameeyo xujooyin kale.
Waa maxay halxiraale? 🧩
Un xujoWaa a ciyaarta oo lagu abuuray dhowr qaybood oo kala duwan oo ay tahay in lagu xidho si loo sameeyo guud ahaan, guud ahaan muuqaal, khariidad ama sawirro Waa ciyaar duug ah. Shaki la'aan, mid ka mid ah hiwaayadaha ugu fiican ee carruurta iyo dadka waaweyn. Dheeraad ah, waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta faa'iidooyinka taxanaha ah ee cilmi nafsiga.
Laakiin qof kasta oo u maleeya in xujo dhawaan la hindisay uu khaldan yahay. Sidii aan idhi, aad buu u duqoobay. Marka horena, hal-abuurkiisa ujeeddo kale ayaa laga lahaa.
Asalka Halxiraalaha ☝️
In kasta oo taariikhyahannadu aysan weli sheegi karin goorta ay xujadaasi muuqatay, haddana waxaa jira aragtiyo ku saabsan asalkeeda.
Mid ka mid ah kuwa ugu aqbalsan waa sawir qaade Ingiriis ah, John Spilsbury, ayaa ikhtiraacay ciyaarta. Si ardaydiisu u bartaan juqraafiga, 1760 John wuxuu abuuray qaybo gogo 'oo qaybo dunida ka mid ah ah. Wadajir, waxay sameeyeen khariidadda adduunka. Adoo adeegsanaya looxyo alwaax ah iyo Spilsbury ardaydiisa wuxuu siiyay madadaalo iyo barasho.
Laakiin qaar waxay leeyihiin halxiraalaha Shiinaha ayaa alifay. Tangram Waa toy ku yaal Shiinaha. Waxay leedahay toddobo qaybood oo keliya, laakiin waxay u oggolaanayaan sameynta dhowr sawir. Si kastaba ha noqotee, way ka duwan tahay halxidhaalayaasha aan u barannay.
Xaqiiqdii, ka dib markii la alifay Spilsbury, halxiraalaha wuxuu noqday mid caan ah. Taasi waa, iyaga ayaa gacanta lagu sameeyay, markaa aad bay qaali u ahaayeen. Ahaa oo kaliya Kacaankii Warshadaha (1760-1820 / 1840) ee halxiraalaha ka jaban. Sababtuna waa horumarka tikniyoolajiyadeed ee Kacaanka Waxay siiyeen qalabkii loo baahnaa si ay caruurtu uga dhigto mid dhaqso badan oo ka jaban.
Intii lagu jiray Murugada Weyn (1929), toy-ku wuxuu la kulmay kor u kac xagga wax soo saarka ah. Xitaa waxaa jiray kiro xujo ah oo loogu talagalay 10 senti saacaddii! Iskusoo wada duuboo, dadku waxay raadsadeen qanacsanaan iyo qanacsanaan markay ku ciyaaraan toy-ga.
Asalka ereyga Xujo
Ereyga Xujo (xujo ku jirta isbaanish) waa la yaqaan oo waa la wada adeegsadaa. Asalkiisu waa Ingiriis. Asalka asalka ah wuxuu ka yimid Laatiinka, falka Latinka waan dhigi doonaa (macnaheedu waa dhig).
Sida loo sameeyo xujo: Talooyin
Xulo xujada ugu habboon
Tilmaamida da'da ku jirta baakadka ayaa ah mid waxtar leh, laakiin looma isticmaali karo shuruudo go'doon ah. Sidoo kale tixgeli aqoonta uu cunugaaga u leeyahay ciyaartaan. Haddii ilmuhu aanu lahayn khibrad hore, sii doorbid moodooyinka leh qaybo ka yar, illaa uu la qabsado.
Hayso jawi ku habboon koritaanka
Marka halxiraalaha la iibsado, waa lagama maarmaan dooro qaabeyn ku habboon isku imaatinka. Sida la doorbidayo, meeshu waa inay xasilloon tahay, oo aysan dad badani qulqulayn.
Xusuusnow in hawshani u baahan tahay feejignaan badan iyo in sawaxanka ama dhaq-dhaqaaqa badani soo dhex galaan Iyadoo maskaxda lagu hayo, waxaa habboon in la doorto geeska qolka ama qol kale oo leh miis weyn.
Sidoo kale, waxaa aad muhiim u ah in la xakameeyo shucuurta oo aan la kala qaadin qaybaha sida ugu dhakhsaha badan markaad guriga ku noqotid, maadaama ay lumayaan, taas oo aakhirka keeni doonta jahwareer. Qiyaas, maalmo kadib u hibeynta, waxaad ogaan doontaa in sawirku uusan dhameystirnayn.
U isticmaal tusaal hage ahaan
U adeegsiga hage tixraac ahaan waa soo jeedin aan la iska indho tiri karin. Waqtiga intiisa badan, toy-ka laftiisu wuxuu keenaa taranka sawirka la isu keenayo.
Ka dhig tusaalahan mid ay heli karaan qof kasta oo ka caawinaya hawsha isku imaatinka, si ay ugu gudbin karaan markay su'aalo qabaan. Xaaladdaas, feejignaanta faahfaahinta waxay sameyn kartaa isbeddel iyo xawaare dhammaystir ah.
Ka bilow qaybaha geeska
Taladayada ugu dambeysa waxay ku saabsan tahay qeexidda istiraatiijiyadda ugu fiican ee isugeynta, lafteeda. Dareenkan, waxaa lagu talinayaa in laga bilaabo geesaha, oo gogoonyadoodu leeyihiin dhinacyo toosan. Sidan, waxaad qiyaasi kartaa cabirka ugu dambeeya sawirka.
Haddii tirada jajabku aad u badan yihiin, kan ugu weyn adduunka wuxuu isu keenaa xoogaa wacdarro ah 40 kun oo gogo ' , isku imaatinka xannibaadda ayaa sidoo kale noqon kara bedel weyn, gaar ahaan haddii ay jiraan carruur ka qaybqaadanaysa. Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa qaadi kara mas'uuliyadda qaybaha yaryar ka dibna qof weyn ayaa qaadaya mas'uuliyadda isku soo dhaweynta.
Dhamaadka dhamaadka, waxaan siineynaa hal tilmaan oo dheeri ah: ku qasbida isku xirnaanta qaybaha waa aragti aan loo baahnayn Markaad ogaato inaysan dhameystirnayn, raadso waxyaabo kale oo beddel ah si aanad u dhaawicin.
Faa'iidooyinka ciyaarta xujooyinka 😀
Xaqiiqdii waad maqashay faa'iidooyinka xujo. Qaabka ciyaartan noocan ahi u kiciso maskaxda ayaa ah mid cajiib ah waxayna ku dhamaataa inay u soo saarto faa iidooyin aan la tirin karin dadka da 'ahaan kala duwan
Isku soo wada duub qaybaha yar yar oo aad sameysan karto guddi dhamaadka waa a jimicsi garasho oo heer sare ah waayeelka, dadka waaweyn, dhalinyarada iyo caruurta, gaar ahaan kuwa ku jira marxalada waxbarasho.
Guud ahaan, halxiraalaha wuxuu u fiican yahay xusuusta iyo marka lagu dabaqo dugsiga, inta badan waxbarashada carruurnimada hore, wuxuu si weyn u fududeeyaa barashada. Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato faa'iidooyinka isticmaalka aaladda dugsiga, maxay yihiin sharciyadiisa ama maxay tahay faa'iidooyinka ay siiso dadka jecel inay halxiraale wadaagaan? Sii wad akhriska.
1- Halxiraalaha wuxuu kiciyaa maskaxda
Waxtarka ugu weyn ee halxiraalaha waa heer aqooneed, maaddaama xujada ay kobcineyso maskaxda. Sidaa darteed, ka horumarinta xirfadaha garashada waa faa iido weyn.
Hawshu waxay saameyn toos ah ku leedahay awoodda xallinta dhibaatooyinka ilmaha, fikirka sii kordhaya iyo hagaajinta xirfadahaaga. Aqoonta tirooyinka, midabada, qaababka, khariidadaha, booska, taraafikada, iyo qaybaha kale ee aqoonta ayaa la kicin karaa.
2- Halxiraalaha ayaa u fiican xusuusta
Dhinac kale oo khuseeya adeegsiga xujada ayaa ah inay ku fiican tahay xasuusta . Wax ku biirintan ayaa muhiim u ah dadka qaba dhibaatooyinka la xiriira hilmaanka.
Tani waxay dhacdaa, sidaa darteed, helitaanka qaybaha saxda ah ee mid kasta waxay ka dhigeysaa qofka inuu uruuriyo macluumaad ku saabsan qaababka iyo lammaanahooda suurtogalka ah. Miyaad qiyaasi kartaa in aad u geliso hawshan dadka da'da ah ee dhibaatooyinka xagga xusuusta ah?
3- Halxiraalaha waxay horumarisaa isku-duwidda mootada
Waxaa jira marxalad carruurnimo oo kuwa yaryar u baahan yihiin si ay u horumariyaan xirfadahooda dhaq-dhaqaaqa. Gacmihiisa iyo farahiisa wali kama warqabaan masaafada iyo khalkhalgelinta walxaha.
Sidaa darteed, xujo ku wajahan dhagaystayaashani waxay u egtahay kicin isuduwidda mootooyinka xitaa carruurnimada hore . Isku dayga inaad kuxirto mid yar oo kan kale ah waa dhiirigelin weyn oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqa gacmaha, indhaha, iyo gacmaha.
Si kastaba ha noqotee, halxiraalaha waa in lagu waafajiyaa da'da gaarka ah ee canugga, oo leh qaybo waaweyn, midabbo badan iyo waxyaabo aad u fudud oo la gelinayo. Waxay sidoo kale khuseysaa dadka waaweyn ama waayeelka dhibaatooyinka isku-duwidda.
4- Halxiraalaha ayaa sababa isdhexgalka bulshada
Waqtiga iskuulku waa waji la-qabsi carruurta. Sameynta asxaabta iyo aqoonsiga kooxaha iyo aragtida bulshada ayaa ah ujeedooyin muhiim u ah carruurta dugsiga.
Iyo si loo gaaro himiladaan, xujo halxiraale waa aalad aad u wanaagsan oo bulsheed . Inta lagu jiro ciyaarta, carruurtu way la falgeli karaan, wada shaqeyn karaan, tartami karaan, guuleysan karaan, ka doodi karaan, la wadaagi karaan guulaha iyo guuldarrooyinka fasalka oo dhan.
5- Halxiraalaha waxay dhiiri gelisaa garashada
Ciyaartan ayaa sidoo kale dhiirrigelinaysa aragtida ardayda dugsiga. Xirfadaha indha indheynta, isbarbardhiga, falanqaynta iyo soo saarista fikradaha waa hanti u adeegi doonta waxbarashada cunug walba .
Guulahaan waxay gaarayaan ilaa qaan-gaadhnimada iyo qaan-gaarnimada, iyagoo si aad ah loogu qiimeeyo tayada xirfadaha. Aragtida shirkadaha waaweyn, ee fursadaha suuqyada waxay ku dhalan karaan carruurnimada, iyada oo leh dhiirrigelinta habboon.
Noocyada xujooyinka 🧩
Suuqa, xujada waxay leedahay dhowr nooc. Oo waxaa habboon in la xusuusto inay yeelan karaan cabbiro kala duwan oo aan ahayn oo keliya kuwa lagu rakibay dusha toosan iyo hal cabbir.
Noocyada halxiraalaha ah ee ugu caansan waa: Bedlam's Cube, Magic Cube, Sum Cube, Pentaminos iyo Tangram. Soo hel faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan moodooyinka Puzzles:
Ciyaartan ayaa ka kooban 13 qaybood oo sameeya cube fiican.Waa xujo uu alifay Bruce Bedlam. Guud ahaan, waxaa jira saddex iyo toban qaybood oo ka kooban xabadaha. Fikradda ayaa ah in la isu geeyo 4 x 4 x 4 cube oo hal abuur leh, maaddaama loolanku yahay in la helo mid ka mid ah in ka badan 19 kun oo dariiqo oo lagu sameeyo.
Noocani waa kan ugu caansan xujooyinka ku jira qaabka 3D.
Cubeerka sixirku waa aqoon hore oo naga mid ah. Magaca rasmiga ah waa Rubik's Cube, oo ah magac lagu sharfo hal-abuuraha, Ernő Rubik oo reer Hungary ah. Waxaa la alifay 1974 waxayna ku dhalatay si weyn - waxay ku guuleysatay abaalmarinta Ciyaaraha Sanadka. 1980-yadii waxay ahaayeen gunaanadka halxiraalahan, oo ilaa maanta baahsan.
Waa xabadaha loo yaqaan 'polyetylenne cubes' oo marka la isku daro sameeya cube.
Kani waa nooc kale oo xujo-qaabeed u eg. Waxaa alifay Piet Hein, oo isagu abuuray ka dib markii uu ka soo qayb galay fasalka makaanikada makaanikada. Cayaartu waxay isticmaashaa toddobo xabbo oo polyetylen ah oo wadajir isu sameeya saddex jibaara 3 x 3 x 3. Qaybahaasi waxay ka kooban yihiin in ka badan 240 qaabab isku imaatin ah
Halxiraalahan ayaa leh shan jibbaara oo siyaabo kala duwan loo qaabeeyey. Guud ahaan, waxaa jira 12 qaabab oo loo yaqaan 'Pentaminó'. Halxiraalahan ayaa dhiirrigeliyay ciyaaraha kombiyuutarka Tetris ama Rampart. Ciyaartani waxay dhiirrigelisay Tetris caan ah.
El tangram Waxay leedahay toddobo qaybood oo keliya oo samaysan kara in ka badan 5,000 oo tirooyin.
Tani waa xujo ama jigsaw dhaqameed badan, marka loo eego qaababka ganacsi ee maanta. Wuxuu ku dhashay Shiinaha isagoo leh toddobo qaybood isla markaana waxay wadaagaan dhowr sawir. Encyclopedia wuxuu aad ugu fogaaday inuu sheego inay suurtagal tahay in la soo ururiyo in ka badan 5,000 oo tirooyin. Shaki la'aan, waxay ahayd dhiirrigelinta cayaaraha xujada leh oo leh cabbir caan ah maanta.
El xujo ugu weyn waxaa loogu magac daray "Keith Haring: dib u eegis laba jeer ahWaxay leedahay 32,256 xabbadood, cabbirkeedu waa 5.44mx 1.92m, baakidhkiisuna culeyskiisu waa 17kg.
Taranka dhalida "Isku-dhafka"waxaa qoray Jackson Pollock mid ka mid ah xujooyinka ugu adkaa ee la isku dhejiyo.
Sanadkii 1997, Peru, kooxdii mooryaanta ahayd ee Movimento Revolucionario Tupac Amaru waxay weerareen hoyga safiirka Japan, in ka badan 72 la haystayaal ah oo ay ka xumaadeen wadaxaajoodka, waxay codsadeen a 2,000 xujo xujo ah. Tani waxay ahayd in la haystayaashu ay yeeshaan hiwaayad oo aysan culays ku saarin wadahadalada.
Sanadkii 1933, xujooyinka waxay bilaabeen inay noqdaan kartoon. Inta badan oo dhan, waxay ka dhigtay mid ka jaban, xitaa waxay soo saartay iibin ku dhow 10 milyan usbuucii!